बलात्कारीलाई कानुन कि बम ?
बम र आतंकले ठूलो बर्बादी गरेकै हो । हामी सबैले यो बर्बादी भोग्यौं र परिवर्तनलाई स्वीकार गरेका हौं । १० वर्ष लामो जनयुद्धको रगत सुकिसकेको छैन, जनयुद्धका एक नायक नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले हत्यारालाई बमले उडाउने घोषणा गरेका छन् । उता जनयुद्धकै अर्का कमाण्डर मोहन बैद्य किरणले यो सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेकाले हतियार उठाउनै पर्ने भो भनेका छन् ।
अव हतियारको कुरा किन ? बम र बन्दुकको कुरा गर्न छोड्नुपर्छ । हामी सबैले न्याय खोजेका हौं, न्यायपूर्ण समाज चाहेका हौं । हामीले चाहेको न्यायपूर्ण समाजको परिकल्पनाकार पनि हामी, सार्थक बनाउने जिम्मेवारी पनि हाम्रौ हो । यसकारण न्यायपूर्ण समाज सिर्जनामा कहाँनेर चुक भएको छ, त्यो गल्ती सुधार्न सुझाव दिउँ, जिम्मेवार सबैले सुधार्ने इमानदार प्रयत्न गरौं र हामी बाँचेको, हाम्रा सन्तती बाँच्ने र सबैका लागि न्यायपूर्ण समाज निर्माण गरौं ।
हो, महामारीजसरी बलात्कार र हत्याका घटना घटिरहेका छन् । हत्यारा र बलात्कारीले दण्ड पाएको अवस्था छैन । सरकार र प्रहरीको बलात्कार र हत्यारा पत्ता लगाउने विषयमा छानबिनमाथि छानबिन समिति गठन भएका छन् र निर्दोषलाई दोषी देखाउने कसरत पनि भएकै हो । अव यस्तो हुनुहुन्न । जोसुकै होस्, सत्ताको निकटका हुन्, जतिसुकै प्रभाव र दबाब दिनसक्ने व्यक्ति हुन्, तिनको मुखुण्डो उतारेर दुईतिहाईको यो सरकारले आफ्नो समृद्धि र सुशासनको दायित्व निर्वाहको क्रमलाई तीब्र पार्नुपर्छ । बलात्कार र हत्यारासँग सरकार डरायो, सरकारले अपराधी लुकायो, जनतालाई छक्यायो भन्ने खालको जुन प्रचारबाजी भएको छ, यस्ता प्रचारले सरकारको ख्यातीमात्र होइन, पार्टी शासनलाई समेत डुबाउने काम गर्छ । पार्टी शासन नै असफल हुन्छ भने कुन शासनमा जाने ?
यता अदालतले नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई ६ पटकसम्म रिहा गर्ने र सरकारले समात्ने नाटक देखायो । यसरी अदालतको अपमान गर्नुहुन्थेन, कि त विश्वकर्मालाई अपराधी साबित गर्नुपथ्र्यो । आखिर छुटे त विश्वकर्मा ? बेकारमा सरकार अपजसमात्र बेहोर्न बाध्य भयो । ३३ किलो सुन प्रकरण होस् कि बालकृष्ण ढुंगेलका मामिला हुन्, अथवा प्रधानन्यायाधीशको सुनवाईको प्रसङ्ग होस् । यसपछि महाभियोगकै चर्चा किन नहोस् । शक्तिशाली सरकार छ, बिधिमा उभिएर सवल निर्णय गरे भयो त । किन घडीको रालोजस्तो दोधारे र दुईजिब्रे चरित्र देखाइरहेको ? दशैंको मुखमा यातायात व्यवसायीलाई भाडा बढाउने अनुमति दिनु हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो ? भ्रष्टाचार , महंगी किन बढिडरहेको छ, अपराधीहरु किन छुनुकमुनुक गरिरहेका छन्, सरकार छ तर कहाँ छ ? यसकारण सरकारले सरकार छ भन्नका लागि समेत समृद्धि र सुशासनका लागि सरकारले निर्मम तरिकाले अघि बढ्न जरुरी छ । अन्यथा बलात्कार, हत्या, अनियमितता, भ्रष्टाचार र कूशासनको खियाले यो सरकारलाई फलाम धुलो पारेजसरी मटियामेट पार्ने निश्चित छ । ऐतिहासिक सरकारले इतिहास रच्ने अवसर छ, ऐतिहासिक काम गर्नका लागि शक्तिमा इच्छाशक्ति मिसाए कसो होला ?